 Site nꞌinye aka Jisọs, anyị ga-anọgide na-achụrụ Chineke aja otuto. Anyị ga-eto ya site nꞌịgwa ndị ọzọ ihe banyere ebube aha ya. Unu echefula iyikwasị onwe unu ịma mma dị ka uwe. Meekwanụ ka ndị nile chọrọ inye aka unu soro unu nwekọọ ihe unu nwere. Nke a bụ ụdị aja na-atọ Chineke ụtọ.
 Reenụ ihe nile unu nwere nye ndị ogbenye. Nke a ga-eme ka akpa unu, nke dị nꞌelu, ju eju. Akpa ahụ dị nꞌelu epughị epu. Akụ unu dị nꞌeluigwe enwekwaghị ike ifu efu. Onye ohi ọ bụla enwekwaghị ike ịga nꞌebe ahụ zuo ha, nla apụkwaghị iricha ha nꞌihi na ọ bụ ebe ọ bụla ego unu dị ka obi unu ga-adịkwa.
 Mgbe Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ dị na Jerusalem, o lere anya hụ ka ndị ọgaranya si etinye onyinye ha nꞌigbe onyinye. Ọ hụkwara otu nwanyị onye ogbenye di ya nwụrụ anwụ ka ọ bịara nꞌebe ahụ tụnye nanị afụ abụọ. Mgbe ahụ Jisọs gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, “Nꞌezie, ego nwanyị ogbenye a tinyere karịrị nke ndị ọzọ nile tinyere. Nꞌihi na ọtụtụ ndị ọzọ sitere nꞌego mapụtaara ha nye onyinye ha, ma nwanyị ogbenye a sitere nꞌọnọdụ ogbenye ya tinye ego nile o nwere.”